Kyaw Nyo Thway: အဲ့ဒီ့တော့ ကျွန်တော်မှာလည်း ရှိတယ်။
အခုအချိန်မှာ လောလောဆယ်တော့ ကိုယ်တတ်နိုင်တာဆိုလို့ ကဗျာတွေ၊စာတွေရေးပြီး ဘလောဂ့်ပေါ်တင်တာကလွဲလို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူး။ တစ်ချို့ကလည်း လုပ်လို့မရနိုင်သေးဘူး။
ရှစ်တန်းလောက်က စည်သူလွင် နာမည်ကြီးစအချိန်ပေါ့။ အဲ့ဒိအချိန်လောက်တုန်းက သီချင်းအရမ်းဆိုချင်ပြီး အဆိုတော်ဖြစ်ချင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုအချိန်ထိလည်း သီချင်းဆိုတာကို အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်နေတုန်းပဲ။ အဆိုသာဝါသနာပါတာ လိုက်ဖ်ရှိုး(ပိုက်ဆံပေးပြီးကြည့်ရတာ) တစ်ခါမှ မကြည့်ဖူး ၊ နားမထောင်ဖူး ပါဘူး။ ဂစ်တာတီးတာလည်း သိပ်မဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းဘေးတီးတဲ့အဆင့်တောင် နောက်ဆုံးက ရေကြည့်ရင် အဆင့်သုံးလောက်ရှိမယ်။း)
ဆယ်တန်းအောင်တော့ ကွန်ပြူတာသင်တန်းတက်တယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့ပတ်သက်တာ ဆိုလို့ Graphic Design အရမ်းဝါသနာပါပါတယ်။ Professional Graphic Designer တစ်ယောက်အနေနဲ့ အသက်မွေးဖို့ကတော့ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေဦးမယ်။ အခုမှကိုယ်က ၀ါသနာရှင်အဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်မိနေတုန်းပဲ။ Graphic Design နဲ့အလုပ်တွေလည်းလျှောက်ဖူးပါတယ်။ တစ်ခါမှမရဖူးဘူး။ ရမယ်ကြံတော့လည်း မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ အပျော်တမ်းအတွက်ပဲ အကျိုးပေးတာလားလည်းမသိပါဘူး။ အခွင့်အရေးရရင်တော့ Graphic Art တွေဖန်တီးပြီး လူတွေကိုပြချင်သေးတယ်။ (ကျွန်တော် ဘယ်လောက်ညံ့သလဲဆိုတား) )။
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးမှာ နောက်ထပ် ဖြစ်ချင်တာက စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တာ။ ကဗျာတွေရေးတယ်။ စာအိတ်နဲ့ထည့်ပြီးစာတိုက်ကနေပို့တယ်။ Fashion Image ၊ သရဖူ၊ ရုပ်ရှင်အမြုတေ၊ သောကြာစာစောင်၊ တို့မှာတော့ ကျော်ညိုသွေး နာမည်နဲ့ နည်းနည်းပါးပါး အရွေးခံရဖူးတယ်။ နောက်တော့ စားဝတ်နေရေးနောက်ကိုလိုက်နေရတာနဲ့ပဲ။ မထည့်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဘလောဂ့်လုပ်ဖြစ်တော့ ကိုယ်သန်ရာ ကဗျာတွေကိုပဲ အများဆုံးတင်ဖြစ်တယ်။
ငယ်ငယ်က ဖျားနေရင် အိပ်မက်တစ်ခုအမြဲတမ်းမက်လေ့ရှိတယ်။ အဲ့ဒိအိပ်မက်က ဖျားတိုင်းပဲ။ အနုပညာသမားဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကလည်း စိတ်မကျန်းမာတိုင်း စိတ်ဓါတ်တွေဖျားနာတိုင်း ရင်ကိုဝင်ဝင်ဆောင့်လေ့ရှိတယ်။
ဘာဝါသနာပါလဲလို့မေးရင် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေဝါသနာပါတယ်လို့ပဲဖြေလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေကျွန်တော် လုပ်ချင်တာတွေကို အဓိက၊သာမည မခွဲပဲ ပြောပြရရင်…………..
1. အဆိုတော်(သီချင်းကောင်းကောင်းဆိုတဲ့သူ) ဖြစ်ချင်တယ်
2. စာရေးဆရာ( အက်ဆေး ၊ကဗျာ၊ ဆောင်းပါးတွေရေးတဲ့သူ) ဖြစ်ချင်တယ်
3. Graphic Artist တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်
4. Photo Model ဖြစ်ချင်တယ်
5. Brocasting Media လုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တယ်(ဒါလည်းဝါသနာပဲ)
6. အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင် သစ်ပင်စိုက်ချင်တယ်(ခြံနဲ့ဝန်းနဲ့)
ဒီလောက်ပါပဲ။ နေရာသစ်တစ်ခုရောက်တိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်သစ်နဲ့တွေ့ရင် ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုစီ ထပ်ထပ်ပြီးတော့ တိုးချင်လည်းတိုးလာနိုင် ရဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ပြောချင်တာ ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ့်ဝါသနာတွေကို ရင်ဖွင့်ခွင့်ရတာကိုက စိတ်နည်းနည်းတော့ ပြေလျော့စေတယ်။ သတိတရနဲ့ စာရေးဖြစ်အောင် တဂ်တဲ့အတွက် ကိုလင်းဦး(စိတ်ပညာ) ကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
Kyaw Nyo Thway: အဲ့ဒီ့တော့ ကျွန်တော်မှာလည်း ရှိတယ်။ - အဲ့ဒီ့တော့ ကျွန်တော်မှာလည်း ရှိတယ်။
Friday, June 19, 2009 at 5:29 AM
ရွှေပြည်သူ at June 22, 2009 at 9:49 AM
ဝါသနာတွေကို ကြည့်ရုံနဲ့ အနုပညာကို ချစ်တတ်တဲ့သူမှန်း သိသာပါတယ်။ ကိုယ်ပျော်မွေ့တဲ့ အနုပညာနဲ့ တကယ် အသက်မွေးနိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ မောင်လေးရေ။
mabaydar at August 5, 2009 at 7:21 AM
နံပါတ် ၄ နဲ့ ၅ က မဗေဒါနဲ့ တူတယ်... အဟဲ... ကဲ ဇွဲမလျော့ပဲ ဆက်သာလျှောက်...